पत्याउनु हुन्छ, कपडाबाट नै मोबाइल चार्ज हुन्छ अब ! - E Net Nepal
Home Amazing World Technology पत्याउनु हुन्छ, कपडाबाट नै मोबाइल चार्ज हुन्छ अब !
पत्याउनु हुन्छ, कपडाबाट नै मोबाइल चार्ज हुन्छ अब !
E NET NEPAL 9:26 PM Amazing World, Technology,
लोडशेडिंगले गर्दा मोबाइल चार्ज गर्न नपाएर तपाई दिक्क हुनुहुन्छ । उसो भए तपाईको लागि खुशीको खबर छ । तपाई आफ्नो शरीरमा नै अब उर्जा बोकेर हिड्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाई ल्यापटप, मोबाइल, ट्याब्लेट जस्ता उपकरणहरु चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ । सोच्नुहोस त कस्तो होला तपाइको शरीरमा नै बिद्युत बोकेर हिड्न मिल्दा ?
बास्तवमा रसायन बैज्ञानिक, भौतिक बैज्ञानिक तथा इन्जिनियरहरुको एक अन्तर्राष्ट्रिय समूह सिलिकन र सोलार सेल मिश्रित लचिलो र लगाउन मिल्ने कपडा बनाउनमा सफल भएका छन् । उनीहरुले सिलिकनमा आधारित अप्टिकल फाइबरलाई सौर्य उर्जाको सेलको क्षमता जोडेर कयौं मिटर लामो बनाउन सफलता हासिल गरेका छन् ।
पेन स्टेट युनिभर्सिटीको रसायनशास्त्री जोन बेडिंगको नेतृत्वको बैज्ञानिकहरुको समुहले यस्तो सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने कपडा तयार परेका हुन् । मानिसको कपाल भन्दा पनि सानो(पातलो) तन्तुको प्रयोग गरेर यसलाई निर्माण गरिएको दाबी निर्माताहरुको छ । बेडिंगका अनुसार अहिले नै पनि १० मिटर लामो लचिलो सोलार सेल फाइबरमा आधारित कपडा उनीहरु बजारमा दिन तयार छन् । बेडिंगको भनाइ छ की यो कपडा खाली लगाउन मात्र हैन सौर्य उर्जाको माध्यमबाट बिद्युत उत्पादन गरेर ब्याट्री चार्ज गर्न पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । "पोर्टेबल इलेक्ट्रिक समानहरु, जस्तै: मोबाइल, ल्यापटप, आइफोन जस्ता सामग्रीहरुको ब्याट्री सकिने समस्याबाट यसले राहत दिलाउँछ ।" बेडिंगले भने ।
बिज्ञान जगतको साथमा फेशन जगतमा पनि हलचल ल्याउन सक्ने दाबी गरिएको यो कपडा अत्याधुनिक बस्त्र मात्रै नभएर सौर्य उर्जा जडित बस्त्र भएकाले यसले बिज्ञान र फेशन दुबैमा क्रान्ति मच्चाउन सफल हुनेछ भन्ने आशा निर्माताहरुको छ ।
Tags # Amazing World # Technology
By E NET NEPAL at 9:26 PM
Labels: Amazing World, Technology
gns August 2, 2013 at 10:49 AM
yesto tshirt kinne capacity hune leta gharma invertor rakhi halxan ni